Sida loo abuuro USB la kaydin karo wixii ISO iyo nidaam kasta ah | War gadget
Haddii aan daacad ahaado, waxaan u maleynayaa tan iyo 2003 in aanan mar dambe isticmaalin wax CD / DVD ah. Ilaa waqtigaas, mar kasta oo aan doonayo inaan rakibo barnaamij culus ama nidaam hawlgal oo dhan, waxaan ku sameeyay anigoo ku gubaya DVD, laakiin waqti badan iguma qaadin inaan ogaado inay jiraan siyaabo noo oggolaanaya inaan fulino hawsha oo dhan iyada oo aan kombiyuutarka laga saarin kumbuyuutarka ama lagu duubin ul USB ah. Haddii, sida aniga oo kale, aadan rabin inaad isticmaasho DVD si aad ugu rakibto nidaam hawlgal, kan ugu fiican ayaa ah abuuro USB ah bootable.
Tilmaamahan waxaan ku sharxi doonnaa sida loo abuuro USB boot ah si aan u awoodno rakibi Windows, Mac iyo Linux ka pendrive ah. Hababka lagu sharaxay qoraalkan ayaa ah kuwa aan inta badan isticmaalo waana isticmaalaa maxaa yeelay waxay iila muuqdaan kuwa ugu fudud. Waan ogahay in lagu abuuri karo iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo kale (sida Ultra ISO), laakiin waxa aan sharaxayo waxay ila muuqataa inaan kujiro meel kasta oo adeegsade kasta, si kasta oo ay khibrad u leeyihiin.
1 Sida loo abuuro Windows Bootable USB
2 Sida loo Abuuro Mac OS X Bootable USB
3 Sida loo Abuuro Linux Bootable USB
3.1 Iyada oo UNetbootin (CD toos ah)
3.2 Iyadoo Lili USB Abuuraha (Xaalad Joogto ah)
Sida loo abuuro Windows Bootable USB
In kastoo siyaabo kala duwan loo samayn karo, waxaan u maleynayaa habka ugu fiican inuu yahay isticmaalka qalabka WinToFlash. Si looga fogaado jahwareerka, waxaan si faahfaahsan ugu socdaa tallaabooyinka la raacayo si loo abuuro Windows USB ah Bootable USB:
Aan aadno Bogga WinToFlash waana soo dagsanaa.
Waxaan fureynaa WinToFlash. Marka ugu horaysa ee aan isticmaalno waa inaanu tashano, oo aan gujino «Next».
Waxaan u qaabeynaa WinToFlash sida shaashadaha soo socdaa tilmaamayaan.
Waxaan calaamadeyneynaa labada sanduuq oo guji «Next».
Waxaan doorannaa ikhtiyaarka "Liisanka Bilaashka ah" oo guji "Next".
MUHIIM AH: hubi inaan haysano uusan calaamadeysan sanduuqa "Mystartsearch" ka hor gujinta «Next». Waa muhiim inaad calaamadeyso sanduuqa sababtoo ah haddii kale mashiinka raadinta ee shabakadeena shabakadda ayaa isbedelaya. Ma ahan fikrad fiican in "aqbalno, aqbalno, aqbalno" iyada oo aan la aqrin waxa aan aqbalno, gaar ahaan haddii waxa ay tahay inaan aqrino ay yihiin jumlad uun
Iyadoo WinToFlash horeyba loo qaabeeyey, waxaan sameyn doonnaa USB Bootable. Waxaan ku bilaabaynaa adigoo gujinaya cagaarka "V".
Shaashadda xigta, waxaan gujineynaa “Next”.
Midka ku xiga, waxaan calaamadeyneynaa xulashada labaad waxaanna gujineynaa "Next".
Tallaabada xigta waa in la doorto muuqaalka Windows-ka ee 'ISO ISO', dooro pendrive-keena oo ah meesha loo socdo oo guji «Next».
Daaqada xigta, waxaan ku aqbalnaa adiga oo saxey sanduuqa ku qoran "Waan aqbalayaa shuruudaha heshiiska shatiga”Oo waxaan gujinaynaa« Continue ».
Ugu dambeyntiina, waxaan sugeynaa howsha inay dhammaato. Waa inay qaadataa ilaa 15-20 daqiiqo, iyadoo kuxiran kumbuyuutarka. Haddii kooxdayadu ay ku kooban tahay kheyraadka, sugitaanku wuu dheeraan doonaa.
Sida loo Abuuro Mac OS X Bootable USB
Sidii aan siyaabo kala duwan iyo munaasabado kala duwan ugu idhi, waxaan ahay wax yar oo ka mid ah "software hypochondriac" aniga ahaanna (haye, aniga) uma muuqato fikrad fiican rakibi OS X ka pendrive ah. Sababta ayaa ah inay aniga igu dhacday inaan OS X ka soo rakibey USB-ga Bootable-ka mana uusan abuurin qeybta soo kabashada, qeybtaas gaarka ah ee noo oggolaaneysa inaan dib u soo celinno oo aan ku sameyno tallaabooyin kale oo ka socda Mac iyadoo aan loo baahneyn inaan abuuro cusub hal qalab. Sidoo kale, habka loo abuurayo OS X Bootable USB badanaa waa dheer yahay, sidaa darteed waxaan qaataa waqtigeyga oo waxaan u sameeyaa si ka duwan (taas oo aanan ogeyn in la tiriyo iyo in kale qofna iima sheego inaan waalanahay). Haddii, sabab kasta ha noqotee, wixii aniga igu dhacay ay kugu dhacaan adiga, waxaan u maleynayaa in markaad rakibto Mavericks (2013, haddii aanan khaldamin) oo aysan kuu abuuri doonin qayb ka soo kabashada, waxaad u baahan tahay inaad sameyso wuxuu sameeyaa raadinta Google ee feyl ah, markii la rakibo, abuuri doona qayb sidan oo kale ah.
In la abuuro OS X Bootable USB waa inaan ka sameysanaa Mac adigoo raacaya talaabooyinkan:
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa furitaanka Mac App Store oo la soo dejiyo faylka rakibaadda ee nidaamka ugu dambeeyay ee Apple (waqtiga qorista qoraalkan waa OS X 10.11 El Capitan).
Waxaan sidoo kale yeelan doonaa inaan kala soo baxno nooca ugu dambeeya ee DiskMakerX boggooda.
Waxaan ku xireynaa pendrive-keenayaga Mac. Waa inuu ahaadaa ugu yaraan 8GB loona qaabeeyaa "OS X Plus diiwaanka."
Waxaan fureynaa DiskMakerX.
Waxaan gujineynaa El Capitan (10.11).
Waxaan gujineynaa "Isticmaal nuqulkan", illaa iyo inta aan horeyba u haysannay faylka rakibidda ee OS X galka codsiyadayada.
Waxaan gujineynaa «An 8 GB USB thumb drive».
Waxaan doorannaa pendrive-keena oo waxaan gujinnaa «Dooro diskigan».
Waxaan gujineynaa "masixi kadib abuur diskiga"
Waxaan gujineynaa “Continue”.
Markay na weydiiso lambarka sirta ah, waanu galnaa.
Markay hawshu dhammaato, waxaan gujinnaa «Jooji».
In kasta oo qoraalkan aan ka hadlayno sida loo abuuro USB-yada Bootable-ka, haddana waxay u muuqataa inay muhiim tahay in la xuso si aan uga bilowno waddo ka duwan kan aan wadno ee adag ee ku saabsan Mac, waa inaan daar kombiyuutarka furaha Alt-ka oo la riixay annaga oo aan sii deyn ilaa aan ka aragno in dhammaan saxannada aan haysano ay muuqdaan. Waa inaan isla sidaas yeelnaa haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan galno qeybta soo kabashada ee aan ka hadlayey bilowgii qaabkan.
Sida loo Abuuro Linux Bootable USB
para Abuur Linux Bootable USB Waxaan kugula talin lahaa laba ikhtiyaar oo kala duwan. Marka hore waa in la abuuro USB Live leh Aetbootin, codsi loo heli karo Windows, Mac iyo Linux. Midda labaad waa in la adeegsado codsi sida Lili USB Creator oo noo oggolaan doona inaan qabanno rakibid joogto ah. Muxuu ku kala soocayaa USB-ga Live ka qaabka joogtada ah? Hagaag, Live USB ma keydin doono isbeddelada aan sameynay markii aan damineyno kumbuyuutarka, halka midka ku adkeysanaya uu abuuri doono galka shaqsiga ah (galka) / guriga) ilaa 4GB, ugu badnaan ay oggoshahay qaabka faylka FAT32.
Iyada oo UNetbootin (CD toos ah)
Haddii aan dooneyno inaan abuurno USB Live ah oo leh UNetbootin, waxaan marka hore u baahan doonnaa inaan rakibno arjiga. Waxaan tan ku samayn doonnaa annagoo fureyna terminal oo aan ku qoreyno amarka soo socda (oo ku saabsan qaybinta ku saleysan Debian, sida Ubuntu)
sudo apt rakib unetbootin
Waxa xiga waa in la diyaariyo pendrive-ka USB-ga halkaasoo aan ka abuuri doonno cutubka rakibidda. Waan awoodnaa qaab pendrive (oo leh GParted, tusaale ahaan) ama ka soo gal pendrive maamulaha faylka, muuji faylasha qarsoon (meelaha qaarkood waxaan ku sameyn karnaa habka kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'Ctrl + H') oo u wareejinta dhammaan waxyaabaha ku jira desktop, tan iyo inta aan ku jiraan nidaamka hawlgalka ee Unix oo halkii laga tirtiri lahaa faylasha galka ku ridaya qashin isla pendrive.
Markaa waa inaanu furno UNetbootin oo galno erayga sirta ah ee isticmaaleheena, wax aan ku qaban karno adoo ku qoraya terminal "sudo unetbootin" ama ku raadineyno liiska arjiga ee qeybinta aan isticmaaleyno.
Isticmaalka UNetbootin waa mid toos ah, waana sababta aan tan hore uga hadlay. Waxaan kaliya oo aan sameyn doonnaa waxyaabaha soo socda:
Marka hore waa inaan doorannaa sawirka isha. Waxaan dooran karnaa xulashada oranaysa «Distribution »oo si otomaatig ah ayey u soo dejineysaa ISO, laakiin ma jecli ikhtiyaarkan maxaa yeelay, tusaale ahaan, Ubuntu 16.04 waxaa la bilaabay Abriil 21 iyo nooca ugu casriyeysan ee ay bixiso UNetbootin waqtiga qoritaanka xariiqyadan. Waa Ubuntu 14.04 , noocii hore ee LTS. Waxaan doorbidaa inaan isticmaalo ikhtiyaarka kale: DiscoImagen.
Waxaan gujineynaa saddexda qodob oo waxaan raadineynaa sawirka ISO ee aan horey u soo dejinay.
Waxaan gujineynaa OK.
Waan sugeynaa. Nidaamku wuxuu qaadan doonaa dhowr daqiiqo.
Iyadoo Lili USB Abuuraha (Xaalad Joogto ah)
Haddii la abuuro Linux Live USB adoo adeegsanaya UNetbootin way fududahay, samee USB joogto ah (sidoo kale wuxuu ku jiri karaa qaab Live) leh Lili USB Abuuraha ma ahan wax intaas ka sii adag. Waxa kaliya ee xun ayaa ah in codsigan loo heli karo oo kaliya Windows, laakiin waa u qalantaa. Tallaabooyinka la raacayo waa kuwan:
Waxaan soo dejisanaa oo rakibnaa LiLi USB Abuuraha (Download).
Waxaan soo bandhigeynaa pendrive halka aan dooneyno inaan ka abuurno feylka rakibida / qaabka joogtada ah ee dekedda USB.
Hadda waa inaan raacnaa tillaabooyinka interface-ka na tusayo:
Tallaabada ugu horreysa waa in la doorto USB-ga aan wadno.
Marka xigta waa inaan doorannaa feylka aan dooneyno inaan ka sameyno USB Bootable ah. Waxaan dooran karnaa mid la soo dejiyey oo ah 'ISO', CD rakibaadda ama soo degsan karno sawirka si aan hadhow u rakibno. Haddii aan dooranno ikhtiyaarka saddexaad, waxaan kala soo bixi karnaa ISO liistada aad u ballaaran ee nidaamyada hawlgalka. Sidii aan ku iri habka UNetbootin, marwalba waxaan doorbidaa inaan kaligey soo dejiyo ISO, taas oo hubinaysa inaan marwalba soo dejisan doono nooca ugu casrisan.
Tallaabada xigta waa inaan u dhaqaajinno sagxadda dhinaca midig illaa aan aragno in qoraalka «(Joogtada ah)» u muuqdo. Cabirku wuxuu ku xirnaan doonaa pendrive-keena, laakiin waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho inta ugu badan ee la oggol yahay. Noo ogolaan mayso wax ka badan 4GB maxaa yeelay taasi waa cabirka ugu badan ee fayl kasta oo qaabka FAT32 uu taageerayo.
Tallaabada xigta waxaan caadi ahaan calaamadeeyaa dhammaan saddexda sanduuq. Midka dhexe, oo aan la xakameynin asal ahaan, ayaa adiga loogu talagalay inaad qaabeyso darawalka ka hor intaadan abuurin USB Bootable.
Ugu dambeyntiina, waxaan taabnaa dogob waana sugeynaa.
Nidaamku uma dhakhso badan yahay UNetbootin, laakiin wuxuu noo oggolaan doonaa inaan qaadanno pendrive-keena oo aan u isticmaalno nidaamkayaga GNU / Linux meel kasta oo aan aadno.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo sameeyo USB Bootable
SJCAM M20 dib u eegista kamaradda isboortiga, waxqabadka wanaagsan ee qiimaha weyn